on 07/10/2019 at 10:05 am
hedduu namatti tola jabaadhaa rabbiin isin wajjiin haa jiraatu. barumsa guddaa irraa arganne
on 07/04/2019 at 07:52 pm
masha allah bayee galatomaa barnotaa bayee issin irraa argadhee
masha allah bayee galatomaa barnotaa bayee issin irraa argadhee alhmdulilah
on 06/09/2019 at 05:34 am
waanti isiin irra hafee hin jiruu. yaadni qabu tokko yeroi application kana banee fayyadamnu data banuun dirqaama waan taheef, osoo dandahamee kanfaltii isaa fkn qr 100 yeroo tokko mega byte dhaan bitannee hanga ishi xumuruuf itti fayyadamne jedha. nuuf hiradha. gargaarsi rabbii isiin wajjin haa jiratuu
on 05/02/2019 at 01:07 pm
dhugumaan nuuralhudaan soora qalbii muslimaati ani akka dabalataatti wannii yaadniin qabuu namoonnii bayyeen seenarraahi waa barata seenaan nama barsiisti kanaafu sagaleedhan seena sahaaboota saganta itti gootanii akka namni guyyaa sagantaan sun jirtu hamileen eegutti osoo gootaniin ja'a ammas sagantaale badhaasa argamsiisan kan akka gaaffii fi deebi live dhan akkasuma kan torbaanitti deebifamu silaa qophaawen ja'a kessattu sagantaalen kun guyyaa sabtii or alhadaa silaa qophaawe sababnin ja'eef irra baayyee namni guyyaa kana manatti argamaafi jabaadha isini wajjiin jirraa
on 05/02/2019 at 12:58 pm
assalaamu'aleykumkuma warahmatullaahi wabarakaatu akkuma gubbaarratti tuqameetti maqaan kiyya dachas ahmed abadir digrii jalqaba mechanical engiringiidhaanin qaba jiraata magaala harar fedhii media islaama tajaajiluu osoonin university jiruutin qabaacha ture ammas fedhiin kiyyaa islaama tajaajiluudha ani yeroo amma kolleejjidhan barsiisa jira kana yoonin ja'e ni gaha natti fakkaata
on 04/12/2019 at 04:14 pm
on 02/26/2019 at 01:51 am
MAASHAA ALLAAH! GALATOOMAA BARNOOTA GUDDAA ARGADHE!
Namoota Ogummaa Miidiyaa qaban kan Nuuralhudaa wajji hojjachuu fedhan galmeessuu eegallee jirra. galmeen kun yeroo hundaa banaadha.
Foormii galmee kana yeroo hunda ni hordofna. namoota nu wajji hojjachuuf galmaayan keessaa kan ulaagaa hojiif barbaadamu guute, gama keessatiin eega dubbisnee booda, qormaata dhiheessineefii yoo qormaata dabre hojii irratti ramadna. kanaafuu namoonni Nuuralhudaa wajji hojjachuu fedhii qabdan hundi akka galmooftan kabajaan isin gaafanna.
Ulaagaa galmeef barbaachisu.
☑ Barumsa miidiyaa sadarkaa kolleejjii irraa eegalee hanga sadarkaa ol aanaa ni qeeballa.
☑ Nama osoo waahee miidiyaa hin baratin uumamaan kennama addaa qabu, kan dandeettii isaa ragaan mirkaneessuu dandayus ni qeeballa.
☑ Namoonni Meeshaa hojiif barbaachisu guutuu qaban dursa argatu.
☑ Namni galmaayu hundi CV (curriculum vitae) dhiheesuu qaba.
☑ Iddoon Qubsumaa bakka networkii gahaa qabu tahuu qaba.
Galmeen kun kan yeroodhaan daangeffamee miti. hoggayyuu foormniin kun banaa tura. namni fedhii qabu sa’aa barbaadetti banee galmaayuu dandaya. nutiis nama ulaagaa nuti hojiif barbaannu guutu, yeroo hojiidhaaf barbaannutti gama keessaatiin dubbisna. kanaafuu eega galmaayanii booda deebisaa hatattamaa eeguun hin barbaachisu.
Liinkii Galmee https://nuuralhudaa.com/galmee/